Ny tian'i Stormlikes mandeha ho azy no fomba vaovao ahazoana mpanaraka tena ao amin'ny Instagram
Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Ny tian'i Stormlikes mandeha ho azy no fomba vaovao ahazoana mpanaraka tena ao amin'ny Instagram
Hostpost • teknolojia
1608189341 tahiry pexels castorly stock 4114787
Inona no zavatra voalohany hataonao raha mampakatra sary amin'ny Instagram ianao, ary mahazo toa ny olona tsy fantatrao na arahinao?
Avelao aho hamina; angamba ianao te hahalala hoe iza ilay olona.
Alao an-tsaina izao fa ilay olona nilaza fa tiany ny hafatrao faharoa, ny hafatrao fahatelo, ny fahefatra anao, sns.
Ny fanehoan-kevitrao manaraka dia azo antoka fa, "Iza no bandy ity izay tia ny lahatsoratro foana?"
Andro iray na hafa dia mety hanapa-kevitra ny hanamarina ny mombamomba ilay olona ianao.
Rehefa manao izany ianao dia alao sary an-tsaina hoe hitanao fa ny karazana atiny ao amin'ny mombamomba azy ireo dia tena tianao ho hita ao anaty fahana anao; inona no hitanao fa hataonao eo noho eo?
Tsindrio ny bokotra manaraka!
Io fampitahana io dia lozika ao ambadiky ny fampiasan'ny olona ny "AUTOLIKES" hahazoana mpanaraka vaovao.
Inona ny Instagram Autolikes?
Instagram autolikes dia karazan-java-maniry toy izany rehefa mampiasa milina tianao ho azy ny lahatsoratry ny olona.
Efa mahazatra antsika rehetra ny mampiasa milina hamita ny asantsika isan'andro. Manomboka amin'ny fanasana ny lovia sy ny fanasan-damba, ny fanaovana zaridaina ka hatramin'ny fanadiovana ao an-trano, ny raharaha ao amin'ny birao ka hatrany amin'ny fivezivezena, sns.
Amin'io lafiny io ihany, afaka mampiasa milina isika hifaneraserana sy hifandraisana amin'ireo mpihaino amin'ny Instagram koa. Ireo milina ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe autolikers, ary Stormlikes mampiasa ny iray amin'izy ireo mba hiteraka autolikes ho an'ny mpanjifa.
Ahoana ny fiasan'ny autoliker?
Ny autoliker dia miasa amin'ny alàlan'ny fampiasana tokana log-in tokana ampiasaina amin'ny kaontinao ary avy eo dia tia lahatsoratra betsaka araka izay azony atao mandritra ny fotoana voafaritra.
Ahoana ny fomba fiasan'ny mandeha irery miaraka amin'i Stormlikes?
Rehefa ianao mividianana ankafizin'ny tiany ny instagram avy any Stormlikes, ny zavatra ataon'izy ireo dia ny fahitan'izy ireo mandeha ho azy andian-dahatsoratra amin'ny anaranao (amin'ny anaran'ny kaontinao).
Araka ny efa noheverinao fa ny karazana hafatra tian'izy ireo dia ho faritan'ny fatra voafaritra voafantina sasany, toy ny toerana misy anao, ny firaisana, ny akany, ny taonanao, sns.
Ohatra, raha amin'ny fotoana ividiananao autolikes dia miteny amin'i Stormlikes ianao fa mividy autolikes ho an'ny sneakerhead lahy any New Jersey eo anelanelan'ny sokajy 12 - 34 taona. Ny olona ao amin'ity famaritana demografika ity ihany no ho lasibatra.
Ary ny isan'ireo lahatsoratra tian'izy ireo dia miankina amin'ny isan'ny autolikes azonao sy ny faharetan'ny fonosana novidianao (izany hoe mandra-pahoviana no tianao hitahirizanay ireo lahatsoratra tianao).
Tombontsoa amin'ny fividianana autolikes Instagram sy ny fandikana ireo tombontsoa ireo amin'ny mpanaraka bebe kokoa
Mamonjy anao ny fotoana sy ny ezaka
Na dia manana ny fotoana rehetra eto amin'izao tontolo izao aza ianao, dia misy fetrany ny halaviranao hitadiavana Instagram ho an'ireo lahatsoratra avy amin'ny kaonty izay tsy arahinao. Soa ihany fa tsy manana io fetra io ny fitaovana autoliker.
Raha tokony handany ora isan'andro isan'andro amin'ny alàlan'ny Instagram mitady lahatsoratra mahasoa tianao sy hifaneraserana aminao, ny autoliker dia afaka mampiasa ny fari-pahaizana manokana sy ny sary ho anao.
Raha mbola nomenao ny rafitra miaraka amina fatra voafaritra hiasa, dia tsy hijanona ny fitsidihan'ny autoliker ny Instagram momba ny lahatsoratra mifandraika amin'ireo masontsivana ireo mandra-pahatongany amin'ny isan'ny autolikes izay naloanao.
Ahoana no fandikana izany amin'ireo mpanaraka?
Rehefa ianao mirotsaha amin'ny lahatsoratr'olona tsy mahalala anao, izy ireo dia te-hahalala hoe iza ianao.
Ary satria ny Stormlikes autolikes dia natao hanampiana anao hitia ny lahatsoratry ny olona izay mitovy fahalianana aminao, ny vintana dia rehefa tonga mba hahalala momba anao ireo olona ireo, dia ho tian'izy ireo ny atiny, ary noho izany dia hahatratra ny manaraka izy ireo bokotra
Mampiseho anao amin'ny mpihaino vaovao
Ny fahiratan-tsaina dia milaza amintsika fa arakaraka ny ahafahan'ny olona mandray anjara bebe kokoa dia vao mainka misy olona vaovao miharihary aminao.
Ohatra, andao alao sary an-tsaina ny autoliker manampy anao hankafy lahatsoratra vaovao 150 isan'andro. Tsy mila matematika ianao vao hahafantatra fa olona vaovao 150 io no nahasarika anao.
Amin'ity 150 ity dia antsasakadiny farafaharatsiny no maniry hahalala momba anao. Mba hanaovana izany, dia hikitika ny anaranao izy ireo ary hanatona ny piraofilina. Rehefa tonga any izy ireo dia ho hitany ny hafatrao, ary satria mety ho zavatra tian'izy ireo izany dia hokapohin'izy ireo ny bokotra manaraka.
Manampy anao hitazona fifamatorana tsy tapaka
Alao an-tsaina ange fa nijerijery Instagram ianao androany ary tafintohina tamin'ny kaonty mahaliana 10 vaovao, izay tianao ny lahatsoratr'izy ireo ary narahinao. Inona no antoka hijanonanao amin'ny Internet amin'ny manaraka rehefa mandefa lahatsoratra vaovao ireo olona ireo?
Somary manify ny vintana, raha tsy misy izany!
Midika izany fa raha miara-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina irery ianao dia misy vintana lehibe mety tsy ho eo amin'ny Internet amin'ny andro kaonty nifandraisanao tamin'ny lasa dia mety hanao lahatsoratra vaovao.
Soa ihany fa tsy miatrika an'io fanamby io ny mpamily iray. An-tserasera foana izy ireo mba hitia sy hifandray amin'ny lahatsoratra. Raha tian'izy ireo ny lahatsoratra amin'ny 11 maraina anio, ary ny mpamorona an'ity lahatsoratra ity dia mamorona lahatsoratra iray hafa manomboka amin'ny 2 maraina rahampitso alina, dia ho tian'izy ireo indray izany, raha mbola tsy tapitra ny faharetan'ny serivisin'izy ireo.
Saika tsy ho vita mihitsy ny hitiavanao ny lahatsoratry ny olona amin'ny fotoana marobe, ary tsy hiraharaha ny hijerena anao iza izy ireo. Raha tsy misy na inona na inona, farafaharatsiny mba hijerena hoe iza ity olon-tsy fantatra manenjika ny lahatsoratr'izy ireo ity.
Soa ihany, miaraka amina autoliking, afaka tianao ny lahatsoratra marobe avy amin'ny olona iray.
Vokatr'izany dia mety manapa-kevitra ny hamerina ny fihetsika ity olona ity amin'ny fanarahana anao. Na mety mahatsikaritra anao izy ireo, manamarina anao ary manaraka anao ao anatin'izany.
Manome anao porofo ara-tsosialy
Rehefa tianao ny lahatsoratry ny olona iray, dia ho tian'izy ireo koa ny hafatrao. Angamba tsy ny olon-drehetra, fa azoko antoka fa hisy olona hamerina ny fihetsika hatrany.
Ny fananana fankafizana marobe amin'ny hafatrao dia mazava ho azy fa porofo ara-tsosialy tsara izay milaza amin'ny olona fa mankasitraka sy mifampiresaka amin'ny hafatrao ny hafa.
Rehefa hitan'ny olona fa mahazo doka sy fifandraisana marobe ny lahatsoratra iray, izy ireo koa dia te-hifandray aminy. Midika fa mitombo ny isan'ny tiany amin'ny lahatsoratra.
Vokatr'izany, ity lahatsoratra ity dia lasa catapult tao amin'ny pejin'ny Instagram Browse.
Tadidio fa rehefa mahazo tiako be ny lahatsoratra iray dia miakatra tsikelikely ao amin'ny pejy fizahana Instagram ihany koa izy.
Raha vao eto amin'ity pejy ity ianao dia manjary miseho amin'ny mpampiasa an'arivony maro, izay maro amin'izy ireo no mety faly manaraka anao.
Ny fomba hiantohana ny fandefasana otolika dia hitondra mpanaraka anao hatrany
Mba hahazoana antoka fa hiasa ho anao hatrany ny autoliking - izany hoe mitondra mpanaraka vaovao - mila maka antoka zavatra roa ianao.
Hamarino fa manana atiny tsara sy mahaliana ianao izay saika hanintona ny fahalianan'ny olona foana. Tsy maninona ny isan'ny autolikes novidinao; raha tsy mahasarika ny atiny hitan'ny olona rehefa mitsidika ny pejy ianao dia tsy hanaraka anao izy ireo.
Hamarino tsara fa mividy autolikes ho an'ny olona nizara fahalianana taminao ianao. Efa nametraka fotoana imbetsaka izahay fa ireo mifanerasera aminao (toy ny lahatsoratr'izy ireo) dia mety hijery ny mombamomba anao. Saingy ny zavatra tokana ahazoana antoka fa namely ny bokotra fanarahana izy ireo rehefa tonga ao amin'ny mombamomba anao izy ireo raha hitany fa mifanaraka amin'ny zavatra mahaliana azy ireo ny atiny.
Famaranana Azontsika lazaina izany ny media sosialy no manova ny teknolojia ary tena marani-tsaina tokoa ka milalao amin'ny fahalianan'ny olona sy ny sainy ankehitriny. Tsy afaka maminavina ny ho avy isika. Saingy, ny autolikes dia iray amin'ny lohahevitra malaza ankehitriny. Inona no ho avy ao amin'ny